Maalinta: Meey 8, 2020
Tallaalka Kovid-19 wuxuu ku soo beegmayaa marxaladda tijaabada xoolaha
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa shaaca ka qaaday in tallaalka dib loogu ceshan karo ee looga soo horjeedo Kovid-19 uu gaaray marxaladda 3 tijaabo xayawaan oo jaamacadeed mid ka mid ahna uu bilaabay tijaabooyinka. Isagoo sheegay in marxaladda caafimaad ay timid kadib tijaabooyinka [More ...]
Qorshe gaadiid dadweyne ayaa loo diyaariyay maalmaha 9-10 May, xilliga bandoowga laga fulin doono magaalada İzmir. Adeegyada gaadiidka dadweynaha ee loogu talagalay kooxaha xirfadlayaasha ah iyo shaqaalaha; Basaska ESHOT, iyagoo kaashanaya Metro iyo TCDD-İzmir Dawlada Hoose [More ...]
Ma Marmaray ka shaqaysaa xaddidaadda usbuuca?
Marmaray Halkalı-Gebz in tareenada, saraakiisha iyo muwaadiniinta ka baxsan baaxadda bandow si ay u fidinayaan gaadiid Jamhuuriyadda Turkey sameeyey dura nus saac war qoraal ah oo ka soo Agaasinka Guud ee Tareennada State, " Wasaaradda Arimaha Gudaha [More ...]
Xarunta baadhitaanka 'Covid-19' waxaa loo aasaasay Shaqaalaha OSB ee Bursa
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa waxay sameysay daraasad muhiim ah oo si dhaw ula socota shirkadaha iyo shaqaalahooda sababa cudurka dillaaca coronavirus (COVID-19). Wasaaradda Caafimaadka, Turkey Xarumaha Maamulka Caafimaadka (TÜSEB), BCCI iyo Bursa Organized [More ...]
Bixinta Koowaad ee 5,5 Milyan Liraska Turkiga Ayaa Loo Sameeyay Ganacsatada Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
Kadib faafitaanka coronavirus ee saameeyay adduunka oo dhan, Duqa Magaalada Kocaeli ee Magaalada Assoc. Dr. By Tahir Büyükakın, waxaa jiri doona “biyo nolosha” oo loogu talagalay ganacsatada gaadiidka dadweynaha [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Izmir waxay joogi doontaa shaqada dhamaadka usbuuca, halkaas oo bandowga lagu fulin doono, iyada oo 19 kooxood ay ka shaqeynayaan aas-aaska iyo dayactirka wadooyinka. Sida Mürselpaşa, Yeşildere, Akçay, jidadka Mithatpaşa iyo Altınyol [More ...]
Toddobaadkaan, oo ah halka bandoowgu ka sii socon doono, IMM waxay sii wadi doontaa inay u adeegto magaalada Istanbul iyada oo ku dhowaad 17 kun oo shaqaale ah dhammaadka toddobaadkan. Adeegyada baska, metro iyo doonta ayaa la qaban doonaa subaxa iyo fiidka. Nadiifinta magaalada oo dhan, [More ...]
Ankara Ankaray iyo Metro waxay ka shaqeeyaan usbuuca fasaxa ee Ankara?
Sida ku xusan go'aanka Ankara Governorate nadaafadeed ee gobolka, taariikhdeedu tahay 19 oo tirsigiisu yahay 09/10, taarikhdu tahay 2020-07.05.2020 Meey 2020, halkaas oo bandoow laga fulin doono baaxadda tillaabooyinka laga qaadi doono cudurka Coronavirus (Covid-30). [More ...]
25 kun oo konteenaro ah ayaa ka gudbi doona Anatolia una sii gudbaya Yurub iyada oo Marmaray sanad walba
Wasiir Karaismailoğlu: “25 kun oo konteenaro ah ayaa sanadkii laga qaadi doonaa xarumaha warshadaha ee Anatolia waxayna ka gudbi doonaan dhinaca Yurub iyagoo maraya Marmaray. Dhoofinta alaabada dhoofinta, oo ku dhammaatay magaalada Çorlu, ayaa loo soo mariyey waddamada Yurub sidoo kale waxaa lagu qaadi doonaa tareen. Waxa ku bixiya tareenka [More ...]
3 Alaabada Difaaca Baykar, Bayraktar TB2 SİHA waxaa la geeyay Taliska Guud ee Gendarmerie. Madaxweynaha warshadaha Difaaca İsmail Demir ayaa ku dhawaaqay gudbinta isaga oo adeegsanaya akoonkiisa warbaahinta bulshada. Demir wuxuu wadaagayaa: “3 Bayraktar TB2 ilaa Taliyaha Guud ee Gendarmerie [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaaladda, oo loo arkaa inay mudan tahay abaalmarino badan iyada oo la adeegsanayo waxqabadkeeda hal-abuurka leh ee gaadiidka dadweynaha ee Şanlıurfa, ayaa baabi'isay codsigii ku-xigeennada ee Gawaarida Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay xilligan. Gaadiidka dadweynaha ee raaxada leh iyo rakaabka [More ...]
KOUSTECH waxay soo saartay "Nidaamka Qaybinta Awoodda" iyada oo la kaashanayo injineerada ASELSAN in loo isticmaalo gawaarida anteenooyinka iskiis u madaxbanaan. KOUSTECH, kooxda Kocaeli Teknolojiyada Nidaamyada Madaxa-bannaan ee Jaamacadda, waxay leedahay kooxo 22 ah ardayda injineerinka ah. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay u fidin doontaa maaskaro muwaadiniin da 'doodu ka weyn tahay 65, kuwaas oo aadi kara wadooyinka waqtiyada ay go'aamisay wasaarada arimaha gudaha axada soo socota. Sii wadida waxsoosaarka iyo qeybinta maaskaro si loo fududeeyo galaangal u yeelashada dadka caafimaadka İzmir, İzmir Metropolitan [More ...]
Shaqaalaha Turkiga ayaa dayactiraya Nidaamyada Gantaalaha Hawada S-400 ee Difaaca Cirka
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Madaxtooyada Turkiga. Dr. Demsmail Demir, sarkaalka SSB AdigaTube Su'aalaha ayuu kaga jawaabay kanaalkiisa. Khudbaddiisa halkaas oo Demsmail Demir uu ku qiimeeyay xaaladda guud ee waaxda, wuxuu ka walaacsanaa nidaamka gantaalaha hawada ee S-400. [More ...]
Bixinta PorSav Gawaarida Difaaca Cirka Awoodda Altitude ee aadka u hooseeya
Marka la eego baaxadda Mashruuca Nidaamka Nidaamka Gantaalaha Difaaca Hawada Gaarka ah (PORSAV), kaas oo lagu fulinayo iyada oo lala kaashanayo ASELSAN iyo Roketsan, howlaha gaarsiinta ayaa la qorsheeyay inay bilaabmaan waqti gaaban. Warshadaha Difaaca oo leh joornaalada qaybta maalinta kale ee mowduuca [More ...]
Shirkadda Our; Waxaan bilaabay inuu kuu adeego illaa iyo 2012 oo si guul leh lagu dhammaystiray mashaariic kala duwan. Naqshadeynta internetka ee loogu talagalay macaamiisheenna qiimaha leh iyadoo la hagaajinayo dhammaan adeegyada tikniyoolajiyada ee looga baahan yahay adduunka dijitaalka ah maalinba maalinta ka dambeysa. [More ...]
Gudaha Hindiya, shaqaalaha muhaajiriinta ah, ee u maleeyay inaysan jirin wax bandow ah oo ka jira bandowga loo yaqaan 'coronavirus', waxay masiibo ku haysay wadada guryahooda iyagoo lugeynaya tareenka tareenka shaqada kadib. Bandowga Hindiya wuxuu ku socdaa, Maharashtra [More ...]
Saldhigga tareenka ee Adana waa saldhigga tareenka ugu weyn ee TCDD oo ku yaal degmada Seyhan ee Adana. Idaacadda waxaa la hawl galiyay 1912. Maanta waxay hoyga u tahay TCDD 6th Agaasime Goboleed iyo Adana - Mersin tareenka. [More ...]
71 Noocyada Dhirta Dhirta (Endemic Plant Speeds) Waxaa laga helay Tuz Gölü Basin
Wasiirka Deegaanka iyo Magaalaynta, Murat Kurum, wuxuu aqoonsaday 71 nooc oo dhir noocyo gaar ah leh oo ku nool Salt Lake Basin ee adduunka. [More ...]
37 milyan 190 kun oo waraaqo sigaar ah oo sharci darro ah ayaa lagu qabtay magaalada İzmir
37 milyan 190 kun oo waraaqo shaashado ah ayaa lagu qabtay baaritaanka ay sameeyeen kooxdii agaasinka guud ee kastamka Wasaaradda Kastamyada oo ku jirtay konteynro ay ku jiraan waxyaabo laga shakiyo oo ka jira Dekadda Aliağa ee İzmir. Waxaa loo qabtay tahriibinta sigaarka [More ...]
Iyada oo la raacayo tallaabooyinka coronavirus, shirkadaha basaska ku-meelgaarka ah ee wata gaadiidka leh 50 boqolkiiba heerka deganaanshaha ayaa sugaya taageero. Codsiyada ka mid ah codsiyada loo gudbiyay Wasiirka Karaismailoğlu, MTV lama bixiyo boqolkiiba 1 VAT, iyo isticmaalka 'FSM Bridge' ee lacagta 'Soo-celinta' SCT. [More ...]
Dowladda Hoose, oo maalgashi weyn ku sameysay gaadiidka magaalada, ayaa soo gaartay khadka tareenka laga bilaabo Isbitaalka Magaalada ilaa Isniinta 75aad ee Degmada iyo Opera iyada oo loo marayo Degmada Kumlubel, iyadoo tamar siineysa khadadka la dhammeeyay, [More ...]
Ku guuleystayaashii "Farshaxanka Da'da Yar: 4aad Sawir Isweydaarsi Naqshadeysan" oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa lagu dhawaaqay. Tartankan oo cinwaan looga dhigay “Domination-i Milliye”, waxaan ku soo bandhigay lacag dhan 46 97 lira abaalmarin 500 shaqo oo naqshadeyn ah. [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank, annaga oo ogaaney in Turkey ay leedahay kaabayaal ah wax soo saarka adag, "Waxaan u oggolaan maayo daciifisa of warshadaha ee Turkish." ayuu yiri. Isagoo ogaadey in soo nooleynta laga filaayo warshadaha gawaarida tan iyo bartamihii bishii Juun, Wasiirka Varank wuxuu yiri: [More ...]